HomeWararka CiyaarahaKooxaha Man United iyo Everton oo ku dagaalamaa saxiixa ciyaaryahan Sami Khedira
Tababaraha kooxda Everton Carlo Ancelotti ayaa lagu soo waramayaa inuu isha ku hayo inuu lasoo saxiixdo burburiyaha khadka dhexe ee Juventus Sami Khedira, waxa oo doonayaa in oo keento Goodison Park markii oo dib u furi suuqa kala iibsigs bisha Janaayo.
33 jirkaan khadka dhexe ee Jarmalka ayaan ku lug laheyn Old Lady intii lagu jiray ololihii 2020-21 waxaana si aad ah loo filayaa inuu ka tago bilowga 2021 ama si bilaash ah xilli ciyaareedka soo socda.
Manchester United ayaa lagu tiriyaa inay xiiseyneyso xiddigii hore ee khadka dhexe ee Real Madrid, kaasoo xulkiisa Jarmalka u saftay 77 jeer.
Si kastaba ha noqotee, sida laga soo xigtay Calciomercato, Merseyside Blues ayaa hogaamineysa loolanka loogu jiro 33 jirka qadka dhexe, iyadoo ninka shanta jeer ku guuleystay Serie A uu doonayo inuu la midoobo tababaraha reer Talyaani, Carlo Ancelotti, kaasoo uu ka hoos ciyaaray Real Madrid.
Warbixinta ayaa soo jeedineysa in ciyaaryahanka heerka caalami ee dalka Jarmalka uu weli tababar la qaadanayo kooxda heysata horyaalka Serie A si joogta ah, si kastaba ha ahaatee, uma badna inuu ku lug yeelan doono in oo ciyaaro kulamada kusoo wajahan kooxda xili ciyaareedkan.
Ciyaaryahanka khadka dhexe ee ku guuleystay Koobka Adduunka ayaa u ciyaaray Old Lady 144 kulan tartamada oo dhan.
Dhanka kale, kooxaha ka dhisan Serie A inter Milan ayaa lagu soo waramayaa inay u sheegeen kooxaha waaweyn ee Premier League ka dhisan ee Manchester United iyo Liverpool in Nicolo Barella uusan iib aheyn qiimo kasta.
23 jirkaan, oo si rasmi ah ugu wareegay San Siro xagaagii ka dib markii uu xilli ciyaareedkii hore amaah ku qaatay Cagliari, ayaa ku guuleystay inuu caawiyo afar caawin 10 kulan oo uu u ciyaaray kooxda Antonio Conte xilli ciyaareedkan.